KALA DUWANAANTA TUFAAXA "CURRENCY", BEERASHADA IYO DARYEESHA GEED GEEDKA - GEED GEEDEEDKA
Apple "Currency" waa bonsai leh taaj oo cufan oo isku dhafan iyo midab ah ee cabbirka dhexdhexaad ah, taas oo ah sifooyinka ugu muhiimsan noocyo.
Waxay u muuqatay qiyaastii 30 sano ka hor Machadka Ruushka ee Dhaqaalaha iyo Xannaanada. Waxay ku saleysan tahay hidaha unugyada "KV6" iyo American "OR38T17". Geedka, inkastoo ay jirridda gaaban tahay, wuxuu leeyahay iska caabin badan oo ku yimaada qolof iyo cudurada kale ee bakteeriyada, uma baahna in lagu nadiifiyo kiimikooyin sun ah oo ka yimaada cayayaanka waxyeello leh. Intaa waxaa dheer, geedka tufaaxa, cajiib ah, siinayaa goosashada weyn ee Bisaylkiisa qaboobaha.
Ma taqaanaa? Hoggaamiyihii hore ee geedaha midhaha qori wuxuu ahaa kaniisad. Toddobaadyadii, wuxuu si khalad ah u arkay on geedkii hore ee tufaaxa "Macintosh" oo ka sii deyn waayadii hore ee aan lahayn laamaha, taas oo si weyn u dhajiyay miraha. Jaangooyo laga soo qaaday laantaan ayaa la duldhigay saamiga. Dhowr geedka geedo gaar ah oo taajir ah ayaa koray.
Dabiiciga ah, geedka tufaaxu waa stem khafiif ah oo aan la soconin laamaha qalfoofka ilaa 2 m sare iyo qiyaastii 25 cm ballaaran. Caleenta qaabka iyo midabku kama duwana geedaha caadiga ah ee tufaaxa, xilliga dayrta ma uusan huruudo jaale ah muddo dheer, waxay ku haysaa baraf aad u badan iyo dhibco cagaaran. Inflorescences waxay ku xiran tahay shtambe, taas oo siinaysa muuqaal xarrago leh.
Miro matag ah ayaa lagu gartaa qaab isku dhafan, maqaar khafiif ah oo midab leh oo dahab ah oo jaale ah oo jilicsan oo jilicsan, midab casiir leh oo casaan leh oo midabkiisu cad yahay.
Celcelis ahaan, noocyada Lacagta ayaa miisaankoodu yahay 150-250 g. Waxay ka sareeyaan daboolka dufanka, kaas oo hoostooda cad cad oo caddaan ah ay si cad u muuqdaan. Miraha waxay leedahay caraf udgoon iyo dhadhan macaan, macaan.
Heerka Bisaylkiisa ee midhaha geedka tufaaxa waa kolonovidnoy "Lacagta" waxay ku dhacdaa gudaha dayrta bartamahaTufaaxyada, sida ku xusan sharaxaadda, waxaa loogu talagalay isticmaalka jiilaalka, si fiican loo hayo. Marka la eego dib u eegista, bannaanka ayaa xusuusta in miraha aan dib u dhicin oo si sahlan loo heli karo marka laga saaro geed. Caanaha ayaa ka duwaya nooca caadiga ah ee geedaha tufaaxa ee daryeelka aan hoos u dhicin iyo sahlan ee beerto.
Ma taqaanaa? Lifespan "Currencies" - ilaa konton sano, iyo wax-soo-saarka sare waxaa loo hayaa kaliya sedex meelood ee muddadan.
Sida iska cad, marka la barbardhigo dhererka, fidinta geedaha tufaaxa, foomamka ujuurada waxay ka faa'iidaystaan ​​habab badan. Iyadoo ku saleysan natiijooyinka beerta iyo bannaanka u, xirfad weyn sifooyinka wanaagsan noocyo waa:
dhirta gaaban ee dhirta, taas oo ka dhigaysa mid sahlan in la jeexo miro iyaga ka soo;
tufaax yar oo tifaftiran;
caabbinta cagaarka, cayayaanka iyo cudurada;
tayada ilaalinta tufaaxa wanaagsan;
dhadhan fiican iyo bandhigid;
tafaariiqda tufaaxa (ku haboon cunista cayriinka iyo caanaha guriga ee dhammaan noocyada);
daryeel fudud (uma baahnid manjooyin iyo buufin).
Xaqiiqada ah in tufaaxu yahay nooc kasta oo aad u faa'iido badan, qof kastaa wuu ogyahay ilmanimada. Waxaad badbaadin kartaa dhadhanka miraha aad u jeceshahay wakhti dheer siyaabo badan: jimicsi, qalaji, macmacaan, macmacaan iyo waxyaabo kale oo wanaagsan.
Waxaa ka mid ah cilladaha, tayada kaliya ayaa ah hoos u dhaca dhalidda ka dib 15-16 sano oo nolosha ah. Tani waxay u banneeyaa beeralayda si ay u noolaadaan beerashada, taniyo geedaha tufaaxa ee qoyan ee qoryaha hoose ayaa bilaabay in ay qalalaan oo geedaha noqdaan kuwo aan macquul ahayn. Maaha suurtagal in la kiciyo fruiting by gooyaa laamaha, sida tufaax caadiga ah. Meelaha ballaaran, waxaa lagu talinayaa in dhirta toban-sano jirka ah la qalajiyo, iyaga oo beddelaya geedo cusub. Intaa waxaa dheer, nidaamkan lama sameeyo isla markiiba beerta, laakiin qaybo ka mid ah, si looga fogaado yaraynta dhalidda.
Ma taqaanaa? Celcelis ahaan, hal geed oo tufaax ah ayaa soo saara ilaa 6 kg oo miraha ah.
Dad badan ayaa aaminsan in haddii geedku uu hoos u dhigo daryeelkiisa, ka dibna beeritaanka waa wax isku mid ah oo ka duwan geedaha kale. Hase yeeshee, waxa ay soo baxday in aan la iska indha tirin xeerarka lagu dooranayo meel iyo geedo geedo ay saameeyaan tirada iyo tayada miraha.
Furaha guusha beerta, dabcan, waa dhalashada caafimaadka leh Iyadoo leh rhizome xoog leh oo aan wax khasaare ah. Horumarinta geedo tufaax ah tobanka sano ee ugu horeeya waxay ku xiran tahay tayada, iyo kiisaska shaybaarka loo yaqaan "columnar" tani waa xilligii miro-ba'an.
Haddii aad horey u soo iibsatay wax tayo sare leh, oo waa mitir-dheer, toosan oo leh shaarici asalka ah, cayayaanka oo dhan oo dhan iyo nidaam xidid oo si wanaagsan loo horumariyey, waxaad sii wadi kartaa inaad kormeerto goobta degelka.
Doorashada meel geed
Kolonovidnaya "Apple Curron" wuxuu jecel yahay inuu abuuro meel caan ah oo leh shucaac, oo laga ilaaliyo dabaylaha woqooyiga iyo qoraallada. Aan qorrax lahayn ama hooska.
Hagid - agagaarka xayndaabka ama dhismaha. Waxa kale oo muhiim ah in la tixgeliyo meesha ay ku yaalaan biyaha dhulka: waa inay ahaadaan kuwo aan ka fogeyn 2 mitir dhulka dushiisa, haddii kale qoyaanka xad-dhaafka ah ayaa khasaari doona xididada, dhirtuna way dhiman doontaa. Fiiri beertaada beertaada, halkaas oo baraf badani ku urursan yihiin xilliga jiilaalka, guga ma jiro biyo baraf ah iyo daadad.
Waa muhiim! Balka dhadhanka ah ayaa si adag u horjoogsanaya sida mulch ee dogob geedka geedaha tufaaxa, maxaa yeelay waxay u muuqdaan in ay oxidize ciidda.
Kombiyuutarrada qaabka loo yaqaan "Colon-shaped", iyo sidoo kale dhammaan geedaha tufaaxa, waxay si fiican u koraan carrada cagaaran ee madow ee lagu macaamilo walxaha waxtar leh.
Markaad dooranayso meel, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo kiimikada substrateka, tan oo ah jawi asiidh ah oo geed aan kori karin. Dhirta oo dhan, wuxuu u baahan yahay dheecaan wanaagsan iyo qoyaan dhexdhexaad ah, sidaa daraadeed, meelaha dhagaxa ah iyo meelaha qaxoontigu aanay ku habboonayn.
Iyadoo la tixgelinayo isdhexgalka tayada qulqulka geedaha caadiga ah, waa lagu beeran karaa laba siyaabood. Ugu horreyn waa in la xiro caleemaha safafka ah ee qiyaas ahaan 30-40 cm oo kala duwan oo u dhaxeeya 1 illaa 2.5 m, tan labaadna waa tiknoolajiyad laba jibbaaran oo u dhaxaysa geedo safafka ah iyo inta u dhaxaysa safarka 1 m.
Sida loo daryeelo tufaaxa "Lacagta"
Inkasta oo koritaanka yar yar, geedku wuxuu leeyahay isudheellada isdabajoogga ah, sidaa daraadeed wuxuu si dhakhso ah u qaataa oo wuxuu bilaabaa inuu horumar sameeyo. 2 bilood ee ugu horreeya ka dib markii la beero ayaa si gaar ah mas'uul ka ah: inta lagu jiro muddadan, ninkii beerta ka shaqaynayay waa inuu ka caawiyaa geedka tufaaxa dhallinyarada leh qoyaan joogto ah, dhar, joonis. Dhirta dhalmada waxay u baahan tahay wax yar oo taxaddar ah.
Waa muhiim! Inta lagu jiro ubax ee geedaha tufaax caadiga ah, iyaga ku buufin leh sharoobada sonkorta. Tani waxay soo jiidi doontaa beeska waxayna gacan ka geysataa boqol boqolkiiba pollination of inflorescences.
Marka hore, geedo of geedka tufaaxa waa kolonovidnoy "Currency" waa in la waraabiyo sida noocan oo kale ah in ciidda ma qalajin, iyo beeraha dheeraad ah u bixiyaan yareynta waraabka 2 jeer toddobaadkii.
Sannadka labaad ee nolosha, geedo tufaax ah ayaa qoyaan 7 maalmood oo kasta. Jardiinooyin waaweyn, waxaad u fududeyn kartaa geeddi-socodka adoo qalabaynaya waraabinta warshadeynta waraabinta, ciidda ama hababka darbiga. Xilliga hawada kulul, qulqulka yar ee substrate wuxuu waxyeeleyn doonaa xididada ka badan abaarta, sidaa darteed hawlaha biyaha ayaa si fiican loo qabtaa subaxa ama fiidkii. Dhulku waa inuu qoyan yahay 30-50 cm. Qadarka biyaha ee lagu shubay hoormoon kasta waxay ku xiran tahay da'da tufaaxa. Geedo yar yar waxay u baahan yihiin qoyaanka inta badan iyo wax yar, iyo geedaha duugoobay waxay u baahan yihiin kuwa soo horjeeda: wax badan, laakiin marar dhif ah. Tusaale ahaan, duurka sanadlaha wuxuu u baahan yahay 3 baaldiyo oo biyo ah, iyo baaldiyo shan sano ah waxay u baahan yihiin 5 baaldiyo.
Ku bilaw inaad biyaha biyo-geedka tufaaxa ka hor intaadan gooyin. Wixii dhirta bislaado, qoyaan labaad ayaa la diyaariyaa inta lagu jiro dhismaha ugxan, ka dibna - inta lagu guda jiro muddada uu kobcayo, ugu dambeyntii - 14 maalmood ka hor miraha laga saaro.
Xaaladda marka dayrka uu yahay dayrta diiran ee kulul, dhirta waa in mar kale la waraabiyaa. Waraabinta dheeraadka ah waxay ilaalineysaa xididada iyo sprouts laga bilaabo khalkhalka.
Ma taqaanaa? Tufaaxa Maqaasi waxay soo saaraan etylene, taas oo ka qaybqaata Baaskiilada degdegga ah ee nafahooda iyo khudaarta ku xeeran. Taasi waa sababta bataatada ee lagu kaydiyaa isku isku mid ah tufaax, bilaabaan inay Gagaashaan.
Waa suurad wacan in la buuxiyo carrada ee dogobka geedka tufaaxa leh maaddooyin wax ku ool ah, doorbiday inta lagu jiro xilli sii kordhaya.
Marxaladda hore, marka caleemaha ay bilaabaan inay si degdeg ah u korto, xalka digada ama digada digaag ayaa lagu shubaa giraanyihii hore ee laga sameeyey dhulka. Xaaladda dabiiciga ah waxaa lagu bedeli karaa qasacadaha ganacsiga nitrogen-ku jira. Marka geedku galo wajiga fruiting, waa muhiim in la quudiyo nitroammofoski (30 g), amooniyam amooniyam (30 g), superphosphate (140 g), chloride potassium (50 g). Beddelka ah ee isku dar ah waxay noqon kartaa xal of 100 g of superphosphate, 70 g of potassium sulfate iyo 10 litir oo biyo ah.
Ka taxaddar quudinta. Bacriminta Nitrogan waxay lagama maarmaan u tahay geedka bilowga horumarka, iyo xilliga dayrta waxay waxyeelleyn karaan oo keliya, sababtoo ah geedaha koraya ayaa heli doona waqti loogu diyaargaroobo jiilaalka iyo qaboojinta. Si kor loogu qaado adkaysiga qaboobaha ee Sebtember, dhirta tufaaxa waxaa lagu quudin jiray Bacriminta wax-soo-saarka ah ee calaamadda "Dayrta" ee ku yaalla baakad ama humus.
Marxaladda ugu dambeysa ee waraabka kasta waa in la dabciyo oo mulching ciidda. Ugu horreyn, waqtiyadan ayaa saameeya goosashada mustaqbalka. Marka labaad, waxay ku quudiyaan nidaamka xididka leh ogsijiinta oo ha u oggolaanin qoyaanka in ay uumi baxaan, ka hortagaan abuurida xayirad adag oo ku taal lakabka ugu sarreeya ee wareegga geedka.
Waa muhiim! Xannuunada Acidic-ka ayaa dhexdhexaad ah 4-ta sano oo kasta leh budada budada ah ee qiyaasta 200 g halkii mitir labajibbaaran. Sababtoo ah lime la'aanta, awoodaan iyada beddel mashiinka gaboobay.
Waxaa jira ku dhowaad aan laamo ku jirin dhirta tufaaxa ah ee tufaaxa ah ee loo baahan yahay in la gooyo, xoqidda kaliya ayaa looga baahan yahay kiisaska dhifka ah marka taajku bilaabmo inuu sameeyo qaab qaldan.
Inta badan tani waxay dhacdaa marka biqilka midhaha sare uu waxyeello u geysto: markaa geed wuxuu leeyahay laba taallo. Qofka daciifiya waa in la gooyaa. Haddii jirku uu bilaabmayo laan, caleemaha dhinaca sidoo kale waa la saarayaa saaridda. On caleemaha miraha sanad walba waa in laga saaro by laba burooyinkeeda. Marmarka qaarkood caleemaha sanadka ugu horreeya ama sanadka labaad waa xiran yihiin. Xaaladdan oo kale, dhammaan burooyinkeeda ayaa la gooyaa, geedka siinaya fursad ay ku sameeyaan taajir xoog leh iyo, si waafaqsan nidaamka xididka. Marka dib-u-ubax baxo oo ku saabsan lix ka mid ah inflorescences ugu xoogan, iyo sanadka soo socda - oo ku saabsan toban.
Noocyada qaarkood ee isteroberi, plomme, abrikot sidoo kale waxay leeyihiin foomka columnar ah.
Xannaanooyinka, habka ugu muhiimsan ee dhalmada ee geedaha tufaaxa xayawaanku waa gooyo. Laakiin si ay u qaadaan cawska jirku waa mid aan suurtagal ahayn, maadaama aysan jirin laamyo dhinac ah, waana wax aan fiicnayn in la jaro dusha sare, taas oo ah sii socoshada jirida weyn. Sidaa daraadeed, ujeedada ka mid ah meelaha banaan ee loogu talagalay gaysashada, jeexjeexyada si adag ayaa loo xiiray, taas oo kicinaysa dhinaca jaantuska. Natiijo ahaan, tufaax kasta oo hooyadeed waxay leedahay 5-10 sprouts.
At home, bannaanka marar badan petioles ee ay noocyada colka ugu jecel yihiin lafdhabarta geedaha tufaax caadiga ah. Xaaladdan, taajku wuxuu si cad u taagayaa laan mid ah, si deeqsinimo leh uugu xiray miraha.
Waa muhiim! Shtamby ayaa ku duudduubay kaydka abuurka, waxay ku kala duwan yihiin muddooyinka dambe ee fruiting.
Wuxuu ku dooday in noocyada jiilaalka ee tufaaxa uma baahna diyaar garow gaar ah qabowga, sababtoo ah waxaa laga tallaaley gaaskooda waalidkood dulqaad heerkulka hooseeya. Dhab ahaan, dhacdadani waa mid aan sal lahayn. Dhammaan geedo yar yar, iyo gaar ahaan columns, waxay si siman u nugul yihiin dabbaaldegyada adag, sidaas darteed bannaanka daryeellayaasha waa waajib ku ah in ay ka caawiyaan dhirta si ay u dhaafaan. Gobollada woqooyiga ee leh mugdi aad u adag oo ujeedooyinkan ah, geedo tufaax ayaa lagu beeray boholo, kuwaas oo ay ka buuxsameen balka iyo caleemaha dhacay iyo barafkii dayrta.
Ciriiriga leh cimilada dabiiciga ah, farsamadaan looma dhaqmin, laakiin wuxuu xididdada ka ilaaliyaa mulch, dusha sarena waxaa lagu daboolaa wax aan la taaban karin. Goolasha kala badh xaashida kala duwan ee taranka ama laamaha dalagyada cagaarka ah. Tani waxaa la sameeyaa si ay jiirka yaryar u cunaan jilicsan. Waxaad uga cabsiin kartaa urka aan fiicneyn, laakiin habkani ma aha mid wax ku ool ah sida hoyga.